Ogaden News Agency (ONA) – Kooxda Hawaarinta oo Tacadiyo Kala Duwan Kagaystay Gobolka Qoraxay.
Kooxda Hawaarinta oo Tacadiyo Kala Duwan Kagaystay Gobolka Qoraxay.
Wararka naga soo gaadhaya gudaha wadanka Ogadeniya gaar ahaan Xarunta Dhexe eeJabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenya ( JWXO) ayaa sheegaya in Maleeshiyadka hawaarintu Tacadiyo kala duwan ku hayaan shacabka Soomaalida Ogadenya.
Wararka kusoo dhacaya Xarunta Dhexe ee JWXO ayaa sheegaya in 07/26/2018 duudciid oo degmada Qabridahare ee xarunta gobolka Qoraxay katirsan lagu xidh xidhay dhalinyaro farabadan oo kasoo horjeedsatay dhibka ay hawaarintu ku hayso shacabka tuulada duudciid.
Wararka ayaa sheegaya in Maleeshiyadka dhidid dhowrka ah ay jidhdil xoogan iyo xadhig ugu gaysteen 13 dhalinyaro ah. Qaar kamid ah dhalinyarada hawaarintu xidh xidheen oo aan magacaantooda helay ayaa kala ah.
1-saadiq maxamed xasan
Maleeshiyadka hawaarinta oo ah calooshood ushaqaysteyaal loo carbiyay xasuuqa shacabka Soomalida Ogadenya ayaa dhibaato caqliga bini,aadamku qiyaasi karin ugaystay shacabka, waxayna wali usii oo manyihiin dhiiga shacabka aan waxba galabsan ee Gumaysiga Itoobiya ku hoos jira,